कसरी घटाउने मोटोपन ? थाह पाइराख्नुस् बिभिन्न सरल तथा घरेलु उपायहरु « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
कसरी घटाउने मोटोपन ? थाह पाइराख्नुस् बिभिन्न सरल तथा घरेलु उपायहरु
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:३९
यदि तपाईं मोटोपन कम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चिनिजन्य परिकार मिठाईबाट टाढा रहनुहोस् । मिठाई तथा तैलीय पदार्थबाट टाढा रहनुहोस् । यस्ता खाद्य पदार्थले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा गर्छ । यस्तो बोसो पेट, तिघ्राजस्ता शरीरका विभिन्न भागमा जम्मा हुने गर्छन् ।
मोटोपन काम गर्न धेरै पानी पिउनुहोस् । यो निकै लाभदायी हुनेछ । एकैचोटी धेरै पानी पिने र लामो समय पानी नपिउने नगरि नियमित अन्तरालमा पानी पिउनाले मेटाबोलिजम बढ्छ र शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निस्कनमा मद्दत गर्छ । यसबाट शरीर स्वस्थ रहन्छ ।
बिहान काँचो लसुन खाने बानी गर्नुहोस् । यसले शरीरलाई निकै फाइदा पनि गर्छ । बिहान लसुनको २-३ पोटी चपाएपछि तातोपानीमा कागती हालेर पिउनाले मोटोपन घटाउन मद्दत गर्छ । यसबाट मोटोपना घट्ने प्रक्रिया दुइ गुनाले हुन्छ । यसबाट शरीरको रक्तप्रवाह पनि सुचारु हुन्छ ।
दैनिक शारारिक ब्यायाम गरेर शरिरको बोसो घटाएर मोटोपन कम गर्नुहोस ।
प्रकाशित मिति: १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:३९
स्वस्थ जीवनको लागि रातमा पिउनुहोस् हल्दी दूध
हल्दीबाट बनाइएका धेरै प्रकारका औषधिहरू र टोनिकहरू बजारमा उपलब्ध छन् तर हल्दीदूधमा भएको जादु शायद
स्वस्थ जीवनको लागि यसरी खानुहोस् एभोकाडो
स्वास्थ्य जीवनको लागि दिनदिनै एभोकाडो खानु फाइदाजनक मानिन्छ । स्वास्थ्यको लागि भन्दै आज भोलि सबै
यस्तो छ, दिनमा २ केरा खानुको फाईदा
केरा विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय फलहरू मध्ये एक हो । वास्तवमा तिनीहरू विश्वव्यापी रूपमा चौथो
डिमेन्शिया रोक्नुलाई सेज उपयोगि जडिबुटी
हामी सबै दिनदिनै हाम्रो दिमाग तेज र फिट भएको चाहान्छौं, तर केहि जीवनशैलीका कारण जस्तै